Baatii Sadaasa galiin Birriin biiliyoonni 19.2 ol walitti qabame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Baatii Sadaasa galiin Birriin biiliyoonni 19.2 ol walitti qabame
On Dec 14, 2020 54
Finfinnee, Muddee 5, 2013 (FBC) – Baatii Sadaasa keessa galiin Birrii Biiliyoonni 19.2 ol sassaabuu Ministeerii Galiiwwaanii beeksise.
Ministeerich Birrii biiliyoona 9 fi miiliyoona dhibba 8 fi miiliyoona 92 ol galii biyyaa keessaa irraa, galii Birrii biiliyoona 9 fi miiliyoona dhibba 3 fi miiliyoona 6 ol daldaalaa alaa irraa, galii hafe taaksii fi lootorii irra walitti qabuu beeksiseera.
Baatii Sadaasaa keessa galii walitti qabuuf karoorfame keessaa %92 raawwatamuu ibseera.
Bara baajataa 2013 keessa waliigala Birrii Biiliyoona dhibba 2 fi biiliyoona 90 sassaabuuf karoorfatee hanga ammaatti Birriin biiliyoonni dhibbi 1 fi biiliyoonni 26 fi miiliyoonni dhibbi 8 fi miiliyoonni 35 ol walitti qabamuu ibsameera.
Baatii shanan darban keessa galii sassaabuuf karoorfame keessaa % 100 ol walitti qabamuu ragaan Ministeera Galiiwwaniirraa argame ni muul’sa.
Baatiwwan 6 darbanitti galii mootummaan seeraan ala dhabuuf ture Birrii biiliyoona 19…
Magaalichaatti daldaltoota sababa malee daballii gatii taasiisan irratti tarkaanfiin…
Baatiwwaan 7 darbanitti Daldala Alaarraa galiin Doolaarri biiliyoonni 1.8 argamuu…
Dooktar Iyoob Takkaaliny Ityoophiyaatti filannoowwan ivastimantiirratti dhaabbilee…
ABUT garee ABO Shaneetti fayyadamuun naannoo Oromiyaatti…
Dooktar Abiy filannoo dhufu ilaalchisee hoggantoota…
Boordiin Filannoo Biyyaaleessaa qajeelfamni lakk. 7/2013…
Ityoophiyaan dhiibbaa mirgoota namoomaa jiru jedhaman…
Baatiwwan 6 darbanitti galii mootummaan seeraan ala dhabuuf…
Magaalichaatti daldaltoota sababa malee daballii gatii…
Baatiwwaan 7 darbanitti Daldala Alaarraa galiin Doolaarri…
Oduu biyya keessaa5794